အင်္ဂါဂြိုဟ်အား ကိုလိုနီချဲ့သိမ်းပိုက်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
အနုပညာရှင်တစ်ဦးမှ ပုံဖော်ထားသော လူသားတို့၏ အင်္ဂါဂြိုဟ်အခြေစိုက်စခန်း
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - အင်္ဂါဂြိုဟ်
အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် လူသားတို့ ကိုလိုနီချဲ့ရန်နှင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန် အထူးအာရုံထားခံရသော ဂြိုဟ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။ မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အခြေနေနှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ် ရေရှိသည်ဆိုသောအချက်များသည် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း သက်ရှိများနေထိုင်ရန် အလားအလာကောင်းသည့် အချက်များပင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် ဗီးနပ်စ်ဂြိုဟ်မှလွဲလျင် ခရီးသွားရန် စွမ်းအင်လိုအပ်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ လက်ရှိ အာကာသနည်းပညာများဖြင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်သို့ ၆-၇ လခန့်ဖြင့် အရောက်သွားနိုင်လေသည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့ လူသားများ ခြေချရန်မူ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှိလေသည်။
ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှင့် အများပိုင်ကုမ္ပဏီများသည် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် လူသားများရေရှည်အခြေချနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် သုတေသနပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအာကာသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှာ NASA, ESA, Roscosmos, အိန္ဒိယအာကာသသုတေသနအဖွဲ့နှင့် တရုတ်အမျိုးသားအာကာသအဖွဲ့၊ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများတွင် SpaceX, Lockheed Martin နှင့် Boeing တို့ပါဝင်သည်။
၁ မစ်ရှင်သဘောတရားနှင့် အချိန်ချမှတ်မှု
၁.၁ SpaceX (လေ့လာရေးအခြေစိုက်စခန်း)
၂ ကမ္ဘာနှင့် ဆင်တူညီချက်များ
၃ ကမ္ဘာနှင့် ကွာခြားချက်များ
၆ ကိုလိုချဲ့ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများ
အစိုးရအာကာသပရိုဂရမ်များ၏ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့လူပါဝင်သော မစ်ရှင်အားလုံးသည် ကိုလိုနီပြုလုပ်ရန်တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပေ။ အခြေစိုက်စခန်းတည်ထောင်ရန်လိုအပ်ချက်များကို စူးစမ်းလေ့လာရန်သာရည်ရွယ်ထားသည်။
ကိုလိုနီတည်ထောင်ရန် အခြေစိုက်နေအိမ်များသည် ကိုယ်ပိုင်တည်မြဲမှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဖြန့်ကျက်နိုင်ရန် အလားအလာရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်နေအိမ်တည်ဆောက်ရန် အဆိုပြုချက်နှစ်ခုမှာ Mars Direct နှင့် Semi-Direct သဘောတရားများဖြစ်ပြီး အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုလိုနီအားပေးသူတစ်ဦးဖြစ်သော Robert Zubrin ကတိုက်တွန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ 
၂၀၁၉ အထိ SpaceX သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့ Starship နှင့် Big Falcon Rocket (BFR) ဒုံးပျံ၏ မဟာစွမ်းအားအဆင့်များဖြင့် အစောဆုံး ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ကုန်တင်ခရီးစဉ်များသွားလာနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းများပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၂၀၂၄ တွင် လူပါဝင်သောလွှတ်တင်မှုများကို ပထမဆုံးပြုလုပ်သွားမည်။ ပထမအဆင့်ပန်းတိုင်မှာ BFR အချို့ကိုလွှတ်တင်ပြီး မီသိန်း၊ အောက်ဆီဂျင် လောင်စာထုတ်ဖော်မည့်စက်ရုံနှင့် မျက်နှာပြင်ဖြန့်ကျက်ရန်ပြင်ဆင်မှုများကို တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကိုလိုနီတည်ထောင်မှုအတွက် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် ကုမ္ပဏီများ၏ စီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာများလည်းပါဝင်လာမှ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်လူသားများအခြေချနေထိုင်ရန် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးပမ်းမှု အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာနှင့် ညီအစ်မ ဗီးနပ်စ်ဂြိုဟ်သည် အရွယ်အစားနှင့် မျက်နှာပြင်ဆွဲအား တူညီသော်လည်း အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် ကိုလိုနီချဲ့ရန် အောက်ပါအချက်များအား သုံးသပ်သင့်သည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှ နေ့သည် ကမ္ဘာမှနေ့နှင့် ဆင်တူလှသည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ် တစ်နေ့တာသည် ၂၄ နာရီ၊ ၃၉ မိနစ်နှင့် ၃၅.၂၄၄ စက္ကန့်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင် ဧရိယာသည် ကမ္ဘာ၏ ၂၈.၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ (ကမ္ဘာ၏ မြေမျက်နှာပြင် ဧရိယာမူ ၂၉.၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။)
အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် ဝင်ရိုးတိမ်းစောင်းမှု ၂၅.၁၉ ဒီဂရီ ရှိသည်။ (ကမ္ဘာ၏ ၂၃.၄၄ ဒီဂရီ တိမ်းစောင်းမှုနှင့် ဆင်တူညီသည်) ရလဒ်အနေဖြင့်
အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် ကမ္ဘာကဲ့သို့ပင် ရာသီဥတုများ ရှိသည်။ သို့သော် တစ်နှစ်ပတ်လုံးဆိုသော် ကမ္ဘာထက် ၁.၈၈ ဆ ပိုကြာလေသည်။
မကြာသေးခင်က နာဆာ၏ အာကာသယာဉ်များ လေ့လာချက်အရ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် ရေခဲတွေ့ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
ကမ္ဘာမြေ၏ ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုအခြေနေတွင် ဇီဝသက်ရှိအချို့သည် အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်သော်လည်း အင်္ဂါဂြိုဟ်တွင် မရှင်သန်နိုင်ပေ။
အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ မျက်နှာပြင်ဒြပ်ဆွဲအားသည် ကမ္ဘာ၏ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသည်။ ဒြပ်ဆွဲအား နည်းပါးခြင်းသည် လူသားတို့၏ အရိုးနှင့် ကြွက်သားများကို ရေရှည်တွင် ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ နည်းပါးသော ဒြပ်ဆွဲအားသည် လူသားတို့အား အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် ကမ္ဘာထက် ပိုအေးသည်။ ပျမ်းမျှအပူချိန်သည် (-၈၇ နှင့် -၅ ဒီဂရီ ဆဲဆီးယပ်စ်) ကြားတွင်ရှိသည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှ အအေးဆုံးမှတ်တမ်းမှာ အန္တာတိကဒေသတွင် (-၉၃.၂ ဒီဂရီ ဆဲဆီးယပ်စ်) သာရှိသည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် ရေမျက်နှာပြင်မှာ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။ ယင်းသည်လည်း သေချာသည့် အခြေနေအောက်တွင်သာ တည်ရှိပေမည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် နေမှ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုဝေးကွာသောကြောင့် မျက်နှာပြင်တွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ရောက်ရှိမှုသည် ကမ္ဘာမြေပြင်သို့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ရောက်ရှိမှု၏ ၄၃.၃ ရာခိုင်နှုန်းသာလျင် ရှိသည်။ ထို့ပြင် တခါတလေ ဖုန်မှုန်မုန်းတိုင်းများ တိုက်ခိုက်သော်
ရက်သတ္တပတ်ချီကာ နေရောင်ခြည်အား ကာဆီးထားပေလိမ့်မည်။
သံလိုက်စက်ကွင်းနည်းပါးမှုကြောင့် ကော့စမစ်ရောင်ခြည်များသည် အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်အား အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
လေထုဖိအားသည်လည်း အင်္ဂါဂြိုဟ်တွင် သတ်မှတ်ချက်အောက်တွင် ဖြစ်နေသည်။ ဝတ်စုံမပါဘဲ လူသားများ အသက်မရှင်နိုင်ပေ။
အင်္ဂါဂြိုဟ်လေထုသည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ နိုက်ထရိုဂျင် ၁.၆ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အောက်ဆီဂျင်မှာ ဝ.၄ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ ရှိသည်။
ပါးလွှာသော လေထုသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အား မစစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါ။
အင်္ဂါဂြိုဟ်အား ကိုလိုနီချဲ့သိမ်းပိုက်ရန် ကိရိယာတန်ဆာပလာများစွာ လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ ယင်းတို့သည် လူသားများအတွက် အစာရေစာ၊ ရေ၊ စွမ်းအင်နှင့် အသက်ရှူနိုင်သော အောက်ဆီဂျင်များ၊ သွားလာရေးယာဉ်များ အစရှိသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်သော ပစ္စည်းများမှာ-
သံယဇာတ တူးဖော်ရေးပစ္စည်း- ရေ၊ အောက်ဆီဂျင်နှင့် သတ္တုတူးဖော်ခြင်း
စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် သိုလှောင်ရေး ကိရိယာများ
↑ Regis၊ Ed။ "Let's Not Move To Mars"၊ New York Times၊ September 21, 2015။ September 22, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Zubrin, Robert (1996). The Case for Mars: The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must. Touchstone. ISBN 978-0-684-83550-1.
↑ Can Life exist on Mars?။ Mars Academy။ ORACLE-ThinkQuest။ 22 February 2001 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mars Mice။ science.nasa.gov (2004)။
↑ Fong, MD၊ Kevin (12 February 2014)။ The Strange, Deadly Effects Mars Would Have on Your Body။ Wired (magazine)။ 2014-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gravity Hurts (so Good)]။ NASA (2001)။
↑ Hamilton၊ Calvin။ Mars Introduction။
↑ Elert၊ Glenn။ Temperature on the Surface of Mars။
↑ Hecht, M. H. (2002). "Metastability of Liquid Water on Mars". Icarus 156 (2): 373–386. doi:10.1006/icar.2001.6794. Bibcode: 2002Icar..156..373H.
↑ Webster၊ Guy (10 December 2013)။ NASA Mars Spacecraft RevealsaMore Dynamic Red Planet။ NASA။ 14 December 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-03-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mars, in Earth's Image။ Discover Magazine။ 12 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mars။ google.fi။ 12 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tomatosphere။ Teachers guide - Sunlight on mars - Tomatosphere။ tomatosphere.org။ 23 June 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်္ဂါဂြိုဟ်အား_ကိုလိုနီချဲ့သိမ်းပိုက်ခြင်း&oldid=693436" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။